ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: မြန်မာသံရုံး၌ တနေ့တာ
မသွားချင်ဆုံးနေရာကို မသွားမဖြစ်လို့ သွားရပြန်ပါပြီ။ မနက် ၉ နာရီလောက် အရောက်သွားပြီး ကောင်တာရှေ့တည့်တည့်မှာရပ်ရင်း မြင်ရ၊ ကြားရ၊ ကြုံရ၊ တွေ့ရတာတွေ ပြန်မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ အံ့ဩမှတ်သားဖွယ် စကားတွေဆိုတာ ဖတ်နေရင်း သိလာပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ ။ကောင်တာဘက်လှည့်ရင် မျက်နှာချိုသွေးလျက်၊ ဒီဘက် ပြန်လှည့်လာရင် မဲ့ရွဲ့၊ ရှုံ့တွ၊ ဆူပုတ်နေတတ်သော လူတွေရဲ့ မျက်နှာများကို မြင်ယောင်ရင်း...
စကားပြောလျှင် အသံချိုသာလျက်၊ (မသိရင်) စိတ်ကောင်းရှိချင်ယောင်ဆောင်လျက် ပိုက်ဆံဘယ်လို တောင်းရမယ်ဆိုတာသာသိသော အမျိုးသမီးကြီးရုပ်ကို မြင်ယောင်ရင်း...
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - အန်တီ... ဟို သမီး ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးချင်လို့လေ။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး။ သမီးက ဒီကို အလည်လာတာပါ။ အခု ထိုင်းကို သွားဖို့ ဗီဇာသွားယူတော့ ပက်စ်ပို့ သက်တမ်း ၆ လပဲရှိလို့ ဗီဇာမပေးလို့ပါ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - သမီးက ကျောင်းသူလား။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - မဟုတ်ပါဘူး အန်တီ။ အဖေ့ဆီ အလည်လာတာပါ။ အခု ထိုင်းကို သွားလည်မလို့လေ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အလည်လာတာဆိုရင်တော့ အန်တီတို့ သက်တမ်းတိုးပေးလေ့မရှိဘူးကွယ့်။ ကျောင်းသားဆိုရင်တော့ တိုးပေးပါတယ်။ (ပက်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးပေးခ ၃၀၀ ပေးရ) အလုပ်နဲ့ဆိုရင်လည်း အခွန်ဆောင်ပြီးရင် တိုးပေးတယ်။ (အခွန်ဖိုးရော၊ ပက်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးခရော ပေးရ)
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - အန်တီရယ် နည်းနည်းလောက်တော့ ကူညီပါ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ခဏလေးနော်။ အန်တီ လုပ်ပေး၊ မပေး ၀င်မေးကြည့်ဦးမယ်။ မရဖို့တော့ များတယ်။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အလည်လာတဲ့သူတွေကို သက်တမ်းတိုးမပေးပါဘူးကွယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးပဲ တိုးပါ။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - ဘယ်လိုမှ ကူညီလို့ မရဘူးလား အန်တီ။ တခြားနည်းလမ်းလေး မရှိဘူးလားဟင်။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဟင့်အင်း။ သမီးက ကျောင်းသူလည်း မဟုတ်ဘူးမလား။ အလုပ်လည်း မလုပ်ဘူးနော်။ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် တစ်လ ၈၀ နှုန်းနဲ့ အခွန်ဆောင်ရင် တိုးပေးလို့ရသေးတယ်။ အန်တီတို့ကလည်း အလုပ်မလုပ်တဲ့သူဆီက အဲလို အခွန်မကောက်ပါဘူးကွယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုမှ ကူညီမရပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာပဲ ပြန်တိုးလိုက်ပါ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဘာလုပ်ချင်တာလဲ။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - အခွန်လာဆောင်တာပါခင်ဗျ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ပက်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးချင်တာလား။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ ရန်ကုန်ပြန်မှာမို့ အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာ လာယူတာပါ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဩော်...ဟုတ်ပြီ။ ဘယ်လက နောက်ဆုံးဆောင်ထားတာလဲ။ (စာရွက်တွေ လှန်လှောပြီး တွက်ချက်နေသည်...)
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - အစ်မ...ကျွန်တော် အခွန်ဆောင်လာတာလည်း ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။ အဟဲ...
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အေးလေကွယ်။ အရင်က ဆောင်တာလည်း ဆောင်တာပေါ့။ ကဲ အခုကတော့ ၉ လစာ ပေးရပါမယ်။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - ဟုတ်ကဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံသား စွန့်လိုသူ - နိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်ဖို့ ပက်စ်ပို့ လာအပ်တာပါ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဩော်။ အခွန်ပြေစာတွေ ပေးပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းရော ဖြည့်ပြီးပြီလားကွဲ့။
(ပေးလာသော စာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်၍...)
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အခွန်ဆောင်ထားတာ ၅ လထဲနဲ့တော့ မရဘူး။ ဒီမှာ ကြည့် သူတို့တွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်က စွန့်တာပဲ။ သူတို့ အခွန်စာရွက်တွေဆို အထပ်လိုက်ကြီး။
မြန်မာနိုင်ငံသား စွန့်လိုသူ - အန်တီတို့စာထဲမှာ အခွန်ပြေစာလို့ပဲ ပါတာလေ။ ပြီးတော့ သူတို့က အခွန်စာရွက်တွေ များတယ်ဆိုတာ အလုပ်လုပ်တာကြာပြီကိုး။ သမီးက ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်လုပ်တာ ကြာမှ မကြာသေးတာလေ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အေးလေ။ အဲဒီတော့ ကျောင်းသားကိုလည်း မှီခိုလို့ သတ်မှတ်တဲ့အတွက် အခွန်တောင် မတောင်းဘူးလေ။ ဒီတော့ သမီးက မှီခိုတွေ ပေးရတဲ့အတိုင်း ၂၂၀၀ (စင်္ကာပူဒေါ်လာ) ပေးရမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား စွန့်လိုသူ - အခွန်ဆောင်ထားတာ နည်းလို့လား အန်တီ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အဲလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထဲမှာ အခွန်ပြေစာများလို့ ရေးထားတာလေ။ သမီးက အခွန်ပြေစာ တစ်ရွက်ထဲဆိုတော့ မရဘူးကွဲ့။ ၂၂၀၀ ပေးမှပဲ ရမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား စွန့်လိုသူ - အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ချေလိုက်လို့ရော ရမလားမသိဘူး။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အဲလိုလည်း မရလောက်ဘူး။ သံအမတ်ကြီးက လက်ခံမယ်မထင်ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံသား စွန့်လိုသူ - အဲလောက် ပိုက်ဆံ မရှိလို့ပါ အန်တီ။ နည်းနည်းမှ ကူညီလို့ မရဘူးလား။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အန်တီတို့က အခွန်လာဆောင်ပါလို့လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆွဲဆောင် ပြောဆိုထားတာ မရှိဘူးလေ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အခွန်ဆောင်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ဖောင်ဖြည့်ပြီး လာဆောင်ကြတာ။ ကိုယ့်အကျိုးလိုလို့ ကိုယ်လာကြတာပဲလေ။ နိုင်ငံသားစွန့်ဖို့လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ အားလည်း မပေးဘူး။ ဒါက သမီးတို့ ကိစ္စပဲ။ ၂၂၀၀ ပေးမှာလား။
မြန်မာနိုင်ငံသား စွန့်လိုသူ - ခုမှတော့ ပေးရတော့မှာပေါ့ အန်တီရယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ပိုက်ဆံမပါလာသေးဘူး။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - အိုကေ... ပိုက်ဆံက ခုချက်ချင်းလည်း ပေးစရာမလိုသေးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ စာရွက်ကို နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာ လာယူဖို့ အန်တီတို့ ရက်ချိန်းပါတယ်။ စာရွက်ဖိုးက ၈ ဒေါ်လာ ပေးရပါမယ်။ စုစုပေါင်း ၂၂၀၈ပေါ့။ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ လက်မှတ်ထိုးပါ။ တချို့တွေက စာရွက် လာယူတဲ့နေ့မှ အိ၊ အ၊ ဂျိ၊ ဂျ ပြောတတ်လို့ ပိုက်ဆံပေးမယ် ဆိုတာ တခါထဲ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာ။ မဟုတ်ရင် စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဒီထဲမှာ အခွန်ဆောင်မဲ့သူက ယောက်ျားနာမည်နဲ့ပါလား။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မအမျိုးသားက အခွန်ဆောင်ပြီး ကျွန်မက ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးမလို့ပါ။ (မှီခို အမျိုးသမီးများအတွက် ခင်ပွန်းက အခွန်ဆောင်မှ ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးပေးပါသည်။)
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဩော်... မှီခိုပေါ့။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - ဟုတ်ကဲ့။ ဒါနဲ့ အစ်မ။ S-Pass နဲ့လူက တစ်လ ၈၀ နဲ့ပုံမှန် အခွန်ဆောင်နေရာကနေ PR ဆို တစ်လ ၁၂၀ ဆောင်ရတာလား။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဟုတ်တယ်လေ။ အရင်ကလည်း ကို (ဘယ်သူ) က တစ်လ ၁၂၀ နဲ့ ဆောင်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်မ ဘယ်မှာများ ပိုတောင်းလို့လဲ။ Did I make any difference? (အသံမာလျက် အင်္ဂလိပ်လိုတွေပါ ပြောတော့သည်...)
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - (စိတ်ဆိုးပြီး အသံတုန်၊ အသံမာလျက်) ကျွန်မမေးတာက S-Pass နဲ့လူက တစ်လ ၈၀နဲ့ ပုံမှန် အခွန်ဆောင်နေရာကနေ PR ဖြစ်သွားရင် တစ်လ ၁၂၀ ပြောင်းဆောင်ရမှာလားလို့ မေးတာ။ (ပြောပြီးနောက် ခုံပေါ်တွင် သွားထိုင်နေသည်။)
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - (ပုံမှန်လေသံ ပြန်ပြောင်းလျက် ကို(ဘယ်သူ)ရဲ့ နာမည်ပြန်ခေါ်၍) ပက်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးချင်တယ်ဆိုရင် ဇနီးဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာလိုပါတယ်။ လက်ထပ်စာချုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ တခုခုပေါ့။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - (ခုနက စိတ်ဆိုးသွားသော အမျိုးသမီး ပြန်ထလာ၍ ပုံမှန်လေသံဖြင့်) ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဆို ကျွန်မ နောက်ရက်မှ ပြန်လာတော့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - အစ်မ (အမှန်တော့ အသက်က အဒေါ်နဲ့ တူအရွယ် ကွာပါတယ်)... ကျွန်တော် ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးချင်လို့ပါ။ work permit တင်မလို့ဟာ ပက်စ်ပို့သက်တမ်းက အနည်းဆုံး ၆ လ ရှိရမယ်ဆိုလို့။ ကျွန်တော်က ဒီကို အလည်နဲ့လာပြီး အလုပ်ရှာတာလေ။
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဩော်...အေး မောင်လေး။ ခုလိုရှင်းပြတော့ လုပ်ပေးရတာ အဆင်ပြေတာပေါ့ကွယ်။ ဟို ကောင်မလေးလို အလည်လာပြီး သက်တမ်းတိုးချင်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ပိုက်ဆံလည်း မရ၊ ဘာလည်း မရနဲ့။ ဒီတော့ မောင်လေးက အခွန် ၆ လစာ ဆောင်ရမယ်။ ကြိုတင် ၀င်ငွေခွန်ဆောင်ခြင်းလို့ ခေါ်တယ်နော်။ တစ်လ ၈၀နဲ့ ၆ လစာ ၄၈၀ ပြီးတော့ ပက်စ်ပို့သက်တမ်း တိုးခက ၃၀၀ ၊ စုစုပေါင်း ၇၈၀ ပေးရမယ်။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - ဟုတ်ကဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ ပေးပါ့မယ်။ (Permit ကျ၊ မကျတော့ မသိသေး။ ပိုက်ဆံကတော့ အရင်ပေးလိုက်ရလေပြီ)
မြန်မာသံရုံးမှ အမျိုးသမီး - ဟုတ်ပြီ။ အဲဒီတော့ ဖောင်မှာ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ခြင်းလို့ ရေးလိုက်ဦး။ အလုပ်ရပြီးရင် ၆ လစာ ဆောင်စရာမလိုတော့ဘူး။ အစ်မတို့က ပက်စ်ပို့သက်တမ်းကို ၆လမဟုတ်ဘူး။ ၃ နှစ်တိုးပေးလိုက်မှာ။ ဟုတ်ပြီနော်။
ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးလိုသူ - ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ကောင်တာဘက်မှ မျက်နှာကို မဲ့ရှုံ့ပြီး ပြန်လှည့်လာသည်။)
ကောင်တာရှေ့တွင် မြန်မာလို ရေရေလည်လည် မပြောတတ်သော ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပက်စ်ပို့သက်တမ်း လာတိုးတယ်။ ကောင်တာက မေးတာကို ကဘောက်တိ၊ ကဘောက်ချာ မြန်မာလိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုရောပြော၍ ရှင်းပြနေတာကို ကောင်တာက သိပ်နားမလည်လို့ ဘေးနားမှာ ၀ိုင်းရပ်ပြီး အလှည့်စောင့်နေသောသူများ ကြားက ကူညီ ဘာသာပြန်ပေးကြပြီး လုံးလည်လိုက်နေကြချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား စွန့်ဖို့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ သူတို့က အရင် တစ်ပတ်ထဲက ဖောင်လာတင်ထားပြီး ဒီနေ့မှ စာရွက်လာယူကြလို့ ဖောင်တင်ပြီး တန်းစီစရာမလိုဘူး။ ကောင်တာကို တန်းသွားပြီး ပြောရုံသာ။ အဲဒါကို မသိတဲ့ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်က လေသံမာမာနဲ့ လာပြောတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ မနက်ထဲက တင်ထားတာတွေ အရင်လုပ်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ တမနက်လုံး စောင့်နေရတာ။ အရင်နေ့ကဟာတွေ အလှည့်မကျော်ပါနဲ့။"
ကောင်တာမှ ပုပုနဲ့ လူတစ်ယောက်က ထအော်တယ်။ "ခင်ဗျား အဲလိုမပြောနဲ့။ ခင်ဗျားက ဘာလဲ။ ခင်ဗျားတို့ကို ရစ်လိုက်လို့ ရတယ်နော်။ ဘာမှတ်လဲ။"
ကောင်တာမှ အမျိုးသမီး - "ကျွန်မတို့လည်း ကူညီနေတာပဲရှင်။ ဒီမှာ ထပ်ထားတဲ့ ဖောင်တွေကို အစဉ်လိုက် ခေါ်ပြီး လုပ်ပေးနေတာပဲ။ ကျွန်မတို့က တစ်ရက်ထဲ အပြတ်ရှင်းပေးတာ။ အရင်နေ့ကဟာတွေလည်း မရှိဘူး။ လာလာ။ ရှင့်နာမည်ပြော။ ခုလုပ်ပေးမယ်။ "
ကောင်တာမှ ခုနက လူကပဲ ကြားဖြတ်ဝင်ပြောတယ်။ "နေ...နေ အစ်မ။ အဲဒီလူကို ကျွန်တော်သိတယ်။ ခင်ဗျား ဟိုတလောကပဲ လာသေးတယ်မလား။ ခင်ဗျာ သားသမီးတွေအတွက် ထောက်ခံစာ လာယူတာ ကျုပ်တို့ပဲ လုပ်ပေးလိုက်ရတာမလား။ ခင်ဗျားရုပ်ကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်။ လူ ၁၀၀မှာ ၁ယောက် ခင်ဗျားရုပ်မျိုး မရှိဘူး။"
ဘာကြောင့် ထိုကောင်မလေးတို့က တန်းစီစရာမလိုတာကို မရှင်းပြဘဲ ပိတ်ဟောက်လို့သာ နေတော့တယ်။ ဟိုလူလည်း ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိ၊ မျက်လုံးလေးပြူးလျက် ရပ်ကြည့်လို့ သူ့မိန်းမက လာဆွဲခေါ်မှ ထိုင်ခုံတွေပေါ် ပြန်ရောက်သွားတော့တယ်။ ရစ်ပစ်လိုက်လို့ ရတယ် ဆိုတော့လည်း ငြိမ်ခံနေရုံသာ ရှိတော့သည်ပေါ့။
ဒါကတော့ ခုနောက်ဆုံးရရှိတဲ့ အီးမေးလ်ပါ။ တကယ် ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး။
Hi All Myanmar who are holding PR status in Singapore,
Beware. Now the counter attack will comes soon.
I visited to Myanmar Embassy this moning because of one of my friends would like to pay income tax. I managed to talk to one of the staffs there who is distance relatives of my friend.
We were asking regarding about the situation in Myanmar to visit home, he said safe to go back as long as you do not mix with those peoples (he meant that NLD and protesters). Before you go to visit to relatives or friends, make sure that they did not involve in the recent event, he said.
Then regard to the tax matter, he told us that inashort time they will change the tax rate to the peoples who are holding the PR in Singapore to S$ 200.00 regardless of their salaries. I asked why and he said because of those peoples are sending letter here and there to stop paying tax. We knew that they are earning more than their decleared salaries. But we are not take action but now they started the matter and the top peoples from Myanmar wanted to make sure that they pay the taxes as per their earning. Elther fix rate to S$200 or as per form 8 they sumit to IRAS or as per CPF contribution. They may be requested for those documentations.
So that is all about and we are going to suffer more.
ဩော်...ပြည်ပနေ မြန်မာပက်စ်ပို့ကိုင် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ ဒုက္ခသည်လည်း ကြီးပေစွတကား။
သံရုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ် တကယ်တော့
ရေးပြီးချိန်: 10/12/2007 07:12:00 PM
13 Oct 07, 00:59
s0wha1: ကိုဂျင်မီ...မှီခိုတွေက အခွန်ပေးစရာမလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားကနေ စွန့်လွှတ်ရင်တော့ အခွန် ၂ နှစ်စာ ၂၂၀၀ ဆောင်ရပါတယ်တဲ့။
13 Oct 07, 00:57
s0wha1: ကိုအမှန်တရားရေ...အဲဒါ ပြောတာပေါ့...တော်တော်လည်း မျက်နှာပြောင်တဲ့ အဒေါ်ကြီး...
s0wha1: အခွန်မပေးတော့ ပက်စ်ပို့ သက်တမ်းက ဘယ်သူတိုးပေးမှာလဲ။ ပက်ပို့စ်သက်တမ်း ကုန်သွားရင် ဒီနိုင်ငံတွေမှာက နေခွင့်မှ မရှိတာ...
13 Oct 07, 00:51
ကြောင်ချေး: တိုင်းပြည်အတွက်ကြောင်ချေးကြေးစည်တီးသွားပါကြောင်း..သာဓု သာဓု သာဓု ပါစိုးဝင်း။။။
ကြောင်ချေး: ဒါမှမကျေနပ်သေးလဲကူငွေလို.တာသဘောထားလိုက်ပါဗျာ။သာဓု သာဓု သာဓု ပါစိုးဝင်း။။။
13 Oct 07, 00:50
ကြောင်ချေး: သူတို.ကလာတောင်းတာမှမဟုတ်တာဗျာကိုယ်တိုင်သွားပေးတာပဲပေးတဲ.လူအပြစ်ပေါ.ခင်ဗျ။သာဓု သာဓု သာဓု ပါစိုးဝင်း။။။
13 Oct 07, 00:41
jimmy: what kind of law is it ?--------dependen have to pay tax ---without working
13 Oct 07, 00:25
Truth: သိပ်ပေးချင်လို့များ လာပေးကြတယ်ထင်နေလား
13 Oct 07, 00:23
Truth: အန်တီတို့က အခွန်လာဆောင်ပါလို့လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆွဲဆောင် ပြောဆိုထားတာ မရှိဘူးလေ။ ဆိုတော့ .......
13 Oct 07, 00:16
Truth: မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများကတော့ အရင်တုန်းကပြည်သူ့ဆိုင်စရေးတွေလိုပါပဲ
12 Oct 07, 20:53
၀င်္ကပါ: သံရုံးဒုက္ခကတော့စံပါပဲ။ အဲဒီသံရုံးကိုတော့ထပ်မ၀င်ချင်တော့လောက်အောင်စိတ်ပျက်တယ်။
12 Oct 07, 20:36
myowinzaw: သံရုံးမှာလုပ်မယ် ၀င်ငွေကောင်းတယ် ပျော်စရာကြီး ဟဲဟဲ
12 Oct 07, 11:18
konay: lar lel twar bar del...ma s0wha1..bamar embassy ma shi yin tate kg mhar bel...sister yey...
11 Oct 07, 23:54
လူသစ်: တောင်းတော့လဲ ပေးရတော့မှာပေါ့ကွယ်
11 Oct 07, 23:28
ငြိမ်းချမ်းအောင်: ဆိုးဝှပ်ရဲ့အခုပို့စ်ကိုဖတ်ရမှနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေရဲ့လစဉ်ဒုက္ခကိုသိရတော့တယ်။ မြန်မာနိုငငံသားအားလုံး ဒုက္ခအပေါင်းမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။